BNI Madagascar –TJE 2018: “Vaovao ny Startup TJE ho an’izay vao manolotra tetikasa” | NewsMada
BNI Madagascar –TJE 2018: “Vaovao ny Startup TJE ho an’izay vao manolotra tetikasa”
Mitodika amin’ny tanora ny banky BNI Madagascar manamafy ny fifaninanana momba ny fandraharahana na ny TJE (Trophée du jeune entrepeneur), andiany faha-14. Mitondra fanazavana bebe kokoa momba izany Ralaimanisa Ndrina, talen’ny fifandraisana.
*Gazety Taratra : ahoana ny fomba fandraisana anjara amin’ny fifaninanana TJE amin’ity taona ity ?
-Ralaimanisa Ndrina : natomboka ny fiandohan’ny volana aogositra ny TJE ary hifarana afaka iray volana, ny 9 oktobra 2018, hanentanana manokana ireo tanora mpandraharaha, hatramin’ny 45 taona. Hita ao amin’ny tambajotra serasera www.bni.mg ny fandraisana anjara amin’izany TJE izany, ary alefa amin’ny adiresy tje2018@bni.mg ny angatahana amin’izany fandraisana anjara izany.
*Andiany faha-14 amin’ity taona ity, misy ve ny mampiavaka izany amin’ny teo aloha ?
– Ny TJE mahazatra hatramin’izay, lasa “TJE croissance +” fa tena zava-baovao ny “Startup TJE”. Natao ho an’ireo vao manolotra tetikasa ity karazam-pifaninanana vaovao ity. Ny “TJE croissance +” kosa, misokatra ho an’ireo efa manana ny orinasany maherin’ny iray taona, mampiasa vola maherin’ny 60 tapitrisa ariary.
* Amina singa manao ahoana no hoentinareo mitsara ny mpandray anjara, voafetra ve ny seha-pihariana ?
-Misokatra amina sehatra rehetra ny fifaninanana fa miankina amin’ny tsena ny hitsarana azy ireo, izany hoe, mamokatra, tsy mamono antoka ilay orinasa efa misy ny tsena ; azo antoka fa hahitam-pahombiazana ny tetikasa heverina ho hajoro. Teknisianina momba ny toekarena rahateo ny mitsara ny fifaninanana, ny avy amin’ny EDBM, ny federasiona antenimieran’ny varotra ; ny minisiteran’ny Indostria sy ny sehatra tsy miankina ; ny mpanao gazety, ary ny BNI.
*Ny loka hatolotra amin’izao TJE andiany faha-14 izao ?
-Ny amin’ny “TJE croissance +”, afaka mindram-bola hatramin’ny 100 tapitrisa ariary ka tsy misy zana-bola ny iray taona voalohany amin’ny famerenana azy. Ho an’ireo izay vao manolotra tetikasa kosa, mahazo maimaimpoana fanampiana telo tapitrisa ariary, miampy “Pack orinasa” ka ao anatin’izany ny Visa, ny Lokanga, ny MVola, ny Fiantohana Miarina, ny BNI-Net. Mandritra ny iray taona ireo tolotra loka ireo ho fampihodinana feno ilay tetikasa vaovao. Anisan’ny mpiara-miombon’antoka manampy ny banky ny Telma, manome “internet” 4G mandritra ny iray taona ho an’ireo mpandraharaha ireo. Tanjona ny fampiroboroboana ireo orinasa madinika sy salantsalany.